किसानलाई दूध, तरकारी बेच्न पोखरा वडा नम्बर २० को अवरोध :: Setopati
किसानलाई दूध, तरकारी बेच्न पोखरा वडा नम्बर २० को अवरोध
भलामबाट पोखरा प्रवेशद्धारमा बाटो छेक्न राखिएको ढाट।
स्कुटरमा दूध बोकेर बजार लैजाँदै गर्दा पोखरा–२० भलामकी सुजना अधिकारीलाई बाटैमा स्थानीय युवाहरुले रोके। बाटोमै बाँसको ढाट तेर्स्याएर बसेका युवाहरु देखेपछि सुजना राोकिइन्, युवाहरुले स्कुटरको चाबी खोसिदिए। किन यस्तो गरेको भन्दा उल्टै ती युवाहरुले थर्काए।
पोखरा महानगर वडा नम्वर २० भलाम प्रवेश गर्ने ठाउँ र्‍यालेचौरमा सडकमै बाँसका ढाट राखेर स्थानीय युवाहरु विहान सबेरैदेखि बेलुका रातिसम्म बस्छन्। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि भन्दै स्थानीय नवोदय युवा क्लबले ढाट राखेर बाटो छेकेका हुन्।
दैनिक २५ लिटर दूध बोकेर पोखरा लैजाने सुजनालाई युवाहरुको समूहले मंगलबार विहान ५ बजे कुनै हालतमा अगाडि बढ्न दिएनन्। उल्टै हात हाल्न खोजे। त्यसपछि फर्किएकी उनले स्कुटर भलाममा राखिन् र अर्कै बाटो दुध बोकेर हिँडिन्। हिँडेरै उनले पोखराको बगरदेखि भैरबटोलसम्मका ग्राहकको घरसम्म दूध पुर्‍याइन्।
अधिकारी मात्र होइन, युवाहरुले ढाट राखेर बाटो छेकेपछि भलामका १८ जना दुग्ध किसान मर्कामा परेका छन्। भलामस्थित श्रवण एग्रो फर्मका संचालक दिनानाथ अधिकारीको गोठमा अहिले ८ वटा भैंसी छन्। उनले दैनिक ५० लिटर दूध बेच्छन्। प्रतिलिटर १०० रुपैयाँका दरले दैनिक ५ हजार आम्दानी गर्छन्।
बाटोमा युवाहरुले छेकेपछि उनले सोमबार दूध पोखरा लैजान पाएनन्। दूध बेच्नका लागि पोखराको फुलबारीस्थित आफ्नै पसल र अरु छिमेकी पसलमा पनि उनले दूध दिन्छन्। सोमबार दूध लैजान नपाएपछि खेर गएको दिनानाथले बताए।
युवाहरुले बाटो छेकेको थाहा पाएपछि केही किसान राति २ बजे नै उठेर दुध बोकेर पोखरा गए। ‘हामी सरकारले रोक लगाएको लागु पदार्थ बेच्न हिँडेको होइन, दिननाथले भने, ‘सरकारले लकडाउनमा किसानलाई दिएको सुविधा हामीले पाएनौं।’
दूध बोकेर पोखरा जान नपाएपछि किसानहरुको समूह विहानदेखि नै वडा नं. २० को कार्यालयमा बसेका थिए। वडाध्यक्षसँग समस्या राख्न वडा कार्यालय पुगेको अर्का किसान सुर्यप्रसाद भण्डारीले बताए ‘हामी सोखले विहानै बजार गएको होइन’, भण्डारीले सेतोपाटीलाई भने, ‘परिवार पाल्नु छ, भैंसी पाल्नुछ भनेर डराइ डराई गएका हौं।’
भलाममा अहिले भैंसी पाल्ने किसान २२ जना छन्। उनीहरुले दैनिक ४ सय लिटर दूध उत्पादन गर्छन्। त्यतिकै संख्यामा तरकारी खेती गर्ने किसान छन्। जो दिनहुँ विहानै बजार लगेर दूध र तरकारी बेच्छन्।
विहान ५ बजे ४० जना किसान दूध, साग र अन्य तरकारी बाली बेच्न पोखरा झर्छन्। पोखरा झरेको १ घण्टामा विक्री गरेर फर्किन्छन्। सरकारले लकडाउनमा तरकारी, फलफूल, दूध जस्ता कृषिजन्य उत्पादन विक्री वितरणमा रोक लगाएको छैन।
पोखरा वडा नं. २० ले नै ती युवाहरुलाई ढाट राखेर बाटो छेक्न लगाएको स्थानीय युवाहरु बताउँछन्। वडा समितिले लकडाउन प्रभावकारी बनाउन भन्दै वैशाख ७ गते स्थानीय राजनीतिक दल, युवा क्लब, आमा समूह, टोल विकास समिति लगायतका प्रतिनिधी बोलाएर बैठक बसायो।
सोही बैठकले गरेको निर्णय अनुसार वडा प्रवेशदरमा ढाट राखेर युवाहरुलाई बाटो छेक्न जिम्मेवारी दिइएको पोखरा २० का वडाध्यक्ष सिमबहादुर गुरुङले बताए। बैठकले र्‍यालेचौरमा मात्र नभई अरु नाका समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले दुग्धजन्य बस्तु, तरकारीको खुद्रा किनबेच अन्य वडामा गर्न नपाउने समेत निर्णय गरेको छ। यो निर्णय गर्दा समाजका अन्य संस्थाका प्रतिनिधी बोलाए पनि किसानका प्रतिनिधी कोही नबोलाएको भण्डारीले बताए।
यसअघि वडाकै आग्रह मानेर ७ दिनसम्म दूध घरमै भैंसीलाई खुवाएको स्थानीय किसानहरुले बताए। सुजनाले भनिन्, ‘यसअघि त दूध भैंसीलाई नै खुवायौं।’ दुधको उपयोग गरेर केही घ्यु बनाएको उनले बताइन् ।
दूध बेच्न नपाउँदा सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्न समस्या आएको किसान भण्डारीको भनाइ छ। ‘मेरो यहीं सहकारीमा ऋणको २६ हजार मासिक किस्ता बुझाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘चैतमा पनि तिरेको छैन, अब बैशाख पनि खप्टिएपछि कसरी तिर्ने?’ उनका अनुसार, भलामका किसान सबैले ऋण लिएर भैंसीपालन र तरकारी खेति गरेका हुन्।
आफ्नो समस्या बताउँदा स्थानीय जनप्रतिनिधीले उल्टै ‘अटेरी किसान’ भन्ने गरेको उनीहरुले दुखेसो पोखे। वडा कार्यालयमा भेला भएका किसानले आफ्नो समस्या राखेपछि समस्या समाधान गरेको वडाध्यक्ष सिमबहादुर गुरुङले बताए।
विहान सुरक्षित रुपमा दूध बेचेर ७ बजे फर्किसक्ने गरी समस्या समाधान गरेको उनले बताए। वडामा प्रवेश गर्ने नाकामा राखिएको ढाट भने स्थानीय युवा लगायत संघ संस्थाको आग्रह अनुसार नै राखेको उनको भनाई छ।
यता कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले ‘बाटो ब्लक’ गर्न नपाइने बताए। ‘बाहिरबाट आउने मानिसको निगरानी गर्ने हो’ पौडेलले सेतोपाटीलाई भने, ‘स्थानीय मानिस पनि हिँड्न नपाउने गरी बाटो छेक्न पाइँदैन।
उनले दुध, तरकारी जस्ता बस्तुको ओसार–पसार र खरिद विक्री त झनै रोक्न नहुने बताए। ‘म तुरुन्त हटाउन लगाउँछु’ उनले भने, ‘अटेरी गर्नेलाई कारबाही हुन्छ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ९, २०७७, ०६:३७:००